आफ्नै फिल्मका हिरोले प्रेमिका उछिट्याएपछि.... - Himalayan Kangaroo
आफ्नै फिल्मका हिरोले प्रेमिका उछिट्याएपछि….
Posted by Himalayan Kangaroo | १ असार २०७४, बिहीबार ०६:०३ |
काठमाडौं । निर्देशक सुदर्शन थापा र अभिनेत्री पूजा शर्मा यतिखेर कलिउड सिने बजारमा हट केक बनेका छन् । उनीहरुको नयाँ चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछुको गीत र ट्रेलर रिलिज भएसँगै युट्युव ट्रेन्डिङमा नम्बर वानमा परेर मात्र सुदर्शन र पूजाको चर्चा चुलिएको होइन । बरु उनीहरुको बीचमा म यस्तो गीत गाउँछुकै नायक पल शाह आएपछि उनीहरुको सम्बन्धले गसिपको स्थान पाएको हो ।
प्रेम गीत चलचित्रका निर्मातासँग पानी बाराबर भएपछि छुट्टै म यस्तो गीत गाउँछु निर्माण गरेका सुदर्शन र पूजा चलचित्रको छायांकन शुरु हुँदासम्म निकै नजिक मानिन्थे । कतिले त उनीहरु रिलेशनसीपमा रहेको अनुमानसम्म गरे ।
सुदर्शन र पूजाले पनि यसको कतैबाट खण्डन वा प्रष्टिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन् । जब म यस्तो गीत गाउँछुको शुटिङ सकियो तब पूजाले बल्ल मुख खोलिन् । तर उनले आफू सुदर्शनसँग नभई पल शाहसँग रिलेशनसीपमा रहेको खुलासा गरिन् । छायांकनकै क्रममा आफूहरु नजिकिएकोसम्म भन्न भ्याइन् । पूजाको यस्तो प्रष्टिकरण उनीहरुका शुभ चिन्तकका लागि समेत आश्चर्यमा पार्ने खालको थियो । यद्यपि सुदर्शनले भने अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
निर्मात्री समेत रहेकी पूजाले पलसँगको आफ्नो फिलिङ्सलाई किन हतारमा सार्वजनिक गरिन् ? कतै उनी सिरियस रिलेशनसीपमा भन्दा पब्लिसिटी स्टन्टमा उद्यत भएकी त होइनन् ? किनकि कलिउड सिने बजारमा हल्ला बिक्छ भन्नेहरुको बाहुल्यता बढ्दोछ ।
Previousछ स्थानीय तह संवेदनशिल सूचिमा
Nextम्याद नाघेको चाउचाउ खाँदा चार सिकिस्त
बलिउड सुन्दरी ऐश्वर्या रायद्धारा आत्महत्याको प्रयास ! के हो त सत्य ?
१९ मंसिर २०७३, आईतवार १६:०२
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार १०:१७
गायक नरेन कुलुङले अष्ट्रेलियाबाटै सार्वजनिक गरे म्यूजिक भिडियो
६ पुष २०७३, बुधबार ०७:५८
आमिर जताततैबाट अमिर
१४ फाल्गुन २०७१, बिहीबार १६:५७